Ugeqa amagula umndeni woboshwe kwelikaSenzo - Ilanga News
Home Izindaba Ugeqa amagula umndeni woboshwe kwelikaSenzo
Udadewabo uthi ukhale engathi kushoniwe ebona umfowabo kwi-tv
ABASOLWA ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa, uMthokoziseni Maphisa (wezinwele ezinkulu) ophikelwa wumndeni wakhe ekuyamanisweni necala lokubulawa kukaMeyiwa.
UKHALA ngobuhlungu obuzwile umndeni wakwaMaphisa, oSuthu, KwaNongoma ngokuvezelwa kwezwe indodana yawo ibalwa nabasolwa abawu-5 ecaleni lokudutshulwa kubulawe uSenzo Meyiwa owayengunozinti we-Orlando Pirates neBafana Bafana.
USenzo wadutshulwa wabulawa ekubo kwesinqandamathe sakhe esingumculi, uKelly Khumalo eVosloorus, eGoli mhla ka-26 ku-Mfumfu (October).
Umndeni wakwaMaphisa uthi uthuke kabi ngoLwesibili kuvezwa uMthokoziseni Maphisa (35) eyamaniswa naleli cala njengoba uthi ngesikhathi kubulawa uSenzo, wayekubo oSuthu ebalekiswe yizimpi zamatekisi eGoli, ezaziphakathi kwabantu baKwaNongoma nabaseMtubatuba, kubangwa umzila.
UMthokoziseni ubevele eNkantolo yeMantshi yaseBoksburg, eGoli, ngoLwesibili noSfiso Ntuli wakwaMpuzana, KwaNongoma, uMzikawulahlwa Stembu Sibiya, uBongani Sandiso Ntanzi no-Mthobisi Prince Mncube.
UNkz Sinqobile Maphisa ongudadewabo kaMthokoziseni, utshele ILANGA ukuthi namanje basakhungathekile.
“Ngesikhathi ngimbona uMthokoziseni evezwa kumabonakude, ngikhale sengathi kushoniwe, kwabuya ubuhlungu engabuzwa ngesikhathi egwetshwa, nakhona okwavela ukuthi wayeboshelwe icala angalenzanga ngoba wayetholakale nomuntu ongalungile, owayefuneka, ngokusho kwakhe.
“Kuvela lezi zindaba nje, ngimatasa nokufaka amaphepha okubuyekezwa kwesigwebo,” kusho uNkz Maphisa.
Utshele leliphephandaba ukuthi umfowabo waboshwa eLeeukop, eGoli ngoLwezi (November) 2014 wagwetshwa iminyaka ewu-25 ngoNdasa (March)-2015 ngecala lokubulala.
Uveze ukuthi umfowabo unamatekisi amathathu, amabili asebenzela eVosloorus, eyodwa isebenzela KwaNongoma, ihambela izindawo ezikude.
“Waboshwa esontweni lokuqala kuLwezi efika eGoli emuva kwesikhathi eside ebalekile ehleli ekhaya,” kusho uNkz Maphisa. Ngakolunye uhlangothi, uNkz Soso Maphisa naye oyilungu lalo mndeni uthi basashaqekile. Uthe kuyathusa ukuthi sekuthathwa bonke abantu bayamaniswa naleli cala.
UMnu Thandazani Mncube ongumfowabo kaMthobisi, uthi namanje basadumele ngokwenziwe wuhulumeni. Uthi umfowabo waboshwa ngoNhlangulana (June) 2014, uSenzo engakabulawa. Wale naphetha ukuphawula ngecala elagojela umfowabo ngo-2014.
Sekuwumlando ukuthi bobawu-5 abasolwa bazihlangule enkantolo ngoLwesibili, bathi kabahlangani nokubulawa kukaSenzo, banqaba nokugibela ebhokisini lofakazi.
Ngesikhathi kuqhubeka ukuvela kwalaba basolwa enkantolo, kuphinde kwaputshuka kwabezindaba imininingwane yophenyo lwabezokushushisa, iNPA equkethe imizamo yabo yokuthola ubufakazi bokuxhumana kukaKelly Khumalo nomunye wabasolwa ngosuku lwesigameko sokubulawa kukaSenzo.
Enkantolo kuvele ukuthi laba basolwa babhekene namacala awu-6, kodwa abawaphikayo. Basole amaphoyisa ngokungawenzi kahle umsebenzi wawo mayelana nokuphenya leli cala. Baveze ukuthi amaphoyisa aqamba amanga ngokuthi baboshwe ngoMsombuluko, njengoba abanye babo bethi baboshwa ngoNcwaba (August).
Kulindeleke ukuba abanye babo abavele begwetshelwe amanye amacala – babuyele kule nkantolo ngomhla ka-27 kuLwezi.
UNgqongqoshe wamaPhoyisa, uMnu Bheki Cele ngesikhathi ememezela ukuboshwa kwalaba basolwa, uveze ukuthi umbuso unobufakazi obuqanda ikhanda ngaleli cala. *Bheka nasekhasini 24
Previous articleUmzali uyavutha ‘kuhlazwa’ ingane yakhe
Next articleIPirates engcupheni yokuntula umqeqeshi